Midowga Yurub, Mareykanka iyo Q. M. oo si isku mid ah usoo dhaweeyay ansixinta R/wasaare Sharma’arke – Radio Muqdisho
Midowga Yurub, Mareykanka iyo Q. M. oo si isku mid ah usoo dhaweeyay ansixinta R/wasaare Sharma’arke
Ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Michele Cervone isla markaana ah madaxa ergeda dhammaan xubnaha Midowga Yurub ayaa soo dhoweeyay ansixinta Ra’isul wasaare Cumar Abdirashid Ali Sharma’arke.
Midowga Yurub ayaa ku baaqay in la dhiso xukuumad loo dhan yahay keeni karta isbedel wanaagsan isla markaana kasban karta kalsoonida dhammaan qeybaha Soomaaliya, waxaana sidoo kale sheegeen in xukuumadda soo socota looga baahanyahy in dadaaladeeda isugu geyso gaarsiinta hiigsiga sanadka 2016-ka.
“Labadii sano ee la soo dhaafayw axaa la sameeyay horumar balaaran hase yeeshee 20 bilood oo kali ah ayaa ka dhiman waqtiga dowladda Soomaaliya loo qorhseeyay in ay dalkan gaarsiiso doorashooyinka ee 2016-ka, shaqooyinka harsan waxaa ay u baahan yihiin go’aano adag iyo hogaamin la la xisaabtami karo” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay Midowga Yurub.
Sidoo kale Midowga Yurub ayaa sheegay in ay dhamaan siyaasiyiinta Soomaaliya ugu baaqayaan in ay si wadajir ah loogu istaago adkeynta iyo xoojinta dadaalada horumarineed oo dalka uu ku talaabsanaayo,waxaana Midowga Yurub ay tilmaameen in ayagoo kaashanayan saaxiibatooda Beesha Caalamka ay sii wadayaan taageerada ay siiyaan Soomaaliya.
Dhinaca kale Dowladda Mareykanka ayaa dhinaceeda soo dhaweysay ansixinta R/wasaare Sharma’rke, waxeyna tilmaantay iney si buuxda ula shaqeyn doonto xukuumadda uu soo dhisi doono.
Sidoo kale Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweysay kalsooni siinta R/wasaaraha cusub waxeyna ku boorisay mas’uuliyiinta dowladda iney isku dhinac u shaqeeyaan si loo gaaro himilooyinka hiigsiga cusub ee sanada 2016-ka.
“SAWIRRO”Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeybgalay xaflad uu xilka kula wareegayay R.wasaare Cumar C.rashiid
"SAWIRRO"Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka qeybgalay xaflad uu xilka kula wareegayay R.wasaare Cumar C.rashiid